दलित एवं भूमिअधिकार आन्दोलनका अगुवा रामको निधन
राजविराज । दलित एवं भूमिअधिकार आन्दोलनका अगुवा बलदेव रामको निधन भएको छ ।
सप्तरी जिल्ला मधुपट्टीमा जन्मिएका राम लामो समयदेखि दलित अधिकारको पक्षमा संघर्षरत थिए । मोही अधिकारको लागि संघर्ष गर्दै आएका उनी आफैं मोही थिए । उनको मंगलबार ७४ वर्षको उमेरमा निधन भएको....
काठमाडौं-तराइ द्रुतमार्ग चाडैँ सक्न रक्षामन्त्रीले दिए निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं–तराई/मधेस दु्रतमार्ग द्रुत गतिमा काम सम्पन्न गन रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले सेनालाई निर्देशन दिएकाछन् । सो द्रुतमार्ग राष्ट्रिय चासोको विषय भएको बताउदै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको सहभागिता अझ वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै रक्षामन्त्री प्रधानले नेपाली सेनाले विपद्....
धरहरा पुनःनिर्माण गर्ने सहमति
काठमाडौं । भूकम्पका कारण ढलेको ऐतिहासिक संरचना धरहरा पूर्ण निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।
सोमबार राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको सरोकारवाला निकायसहितको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । बैठकमा प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, पुरातत्व विभाग र मेरो धरहरा....
झुक्यो नेपाल सरकार, ‘विज्ञापन रहित नीति’ स्थगित
काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु गर्ने भनेको ‘विज्ञापन रहित नीति–२०७३’ तत्कालको लागि स्थगित गरेको छ ।
नीतिमा उल्लेखित कतिपय कार्यहरु सम्पादन गर्न बाँकी रहेको भन्दै तत्कालका लगि स्थगित गरेको सूचना तथा संञ्चार मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।
सरकारले डाउनलिङ् अनुमति लिई....
अमेरिकाले ५२ अर्ब सहयोग दिँदै
काठमाडौं । नेपालको विकासमा साझेदारी गर्दै आएको अमेरिकाले नेपाललाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम ५२ अर्ब सहयोग गर्ने भएको छ । अमेरिकाले नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि यो सहयोग दिने भएको हो ।
‘मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी)’ परियोजनाअन्तर्गत प्रदान गर्न लागिएको सहयोगबाट नेपालमा....
भोलीबाट मतदाता नामावली संकलन, त्रुटी सच्याउन पनि सकिने
काठमाडौं । मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश नभएका व्यक्तिले श्रावण १ (भोली) देखि सबै जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा नाम दर्ता गराउन सकिनेछ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ ।
यस अघि २०७४ वैशाख ३ गते....
साउन देखि कतिवटा च्यानल ?
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको विज्ञापन रहित नीति र केबल व्यवसायीहरुको विरोधका कारण साउन १ गतेदेखि तीन च्यानल मात्र आउनेभएको छ । सरकारको क्लिन फिडका कारण दबाब दिनका लागि नेपाल टेलिभिजन, एाटीभी प्लस र एनटीभी न्युज गरी तीन सरकारी च्यानलमात्रै देखाउने केबल व्यवसायी महासंघले जनाएको छ....